Booliiska oo Muqdisho ka sameeyay howlgal dad badan soo dhaweeyeen (Daawo Sawirro) - RajoQaran News Around The World
Home WARARKA Booliiska oo Muqdisho ka sameeyay howlgal dad badan soo dhaweeyeen (Daawo Sawirro)
Booliiska oo Muqdisho ka sameeyay howlgal dad badan soo dhaweeyeen (Daawo Sawirro)
Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir waxa ay kusoo qabteen waxyaabaha maanka dooriya ee loo yaqaan Calaqa.
Booliiska oo helay xogta guri kuyaala degmada Wadajir oo lagu farsameeyo waxyaabaha maanka dooriya gaar ahaan calaqa ayaa gacanta kusoo dhigay, waxa ayna booliiska xireen sadex qof oo ku lug lahaa waxyaabahaasi maanka dooriya.
Saraakiil katirsan booliiska, Maxkamada gobolka Banaadir iyo xafiiska xeer ilaalinta ayaa tagay guriga lag qabtay maandooriyaha, waxa ayna booliiska halkaasi ku bur buriyeen calaqa oo aad u badnaa iyadoona alaabtii lagu sameenayayna horey usii qaateen.
Shacabka magaalada Muqdisho ayaana aad ugu farxay una bogaadiyay howlgalkan ciidamada booliiska kusoo qabteen calaqan faraha badan, waxa ayna shacabku sheegeen in dhibaato badan ku qabeen calaqan oo ay isticmaalaan dhalinyaro badan oo la qalday.
Previous articleDowlada Soomaaliya oo dalka kusoo celineysa Soomaali badan oo dibadda ku xayiran
Next articleXog: Kaamirooyinka CCTV ee magaalada Muqdisho oo loo sameeyay ciidan ilaaliya